31 Taona Aty Aoriana, Niverina ny Hazavana Ao Chernobyl · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2017 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, македонски, русский, 日本語, Italiano, Türkçe, বাংলা, Aymara, عربي, polski, Български, नेपाली, Esperanto , English
Nidiran'ny Poloney mpandehandeha tao amin'ny tanànan'i Pripyat ao amin'ny faritra tsy azo aleha amin'i Chernobyl ary sambany taorian'ilay loza mahatsiravina niseho tamin'ny 1986 no nampirehetany ny jiro tao amin'ilay toby nokleary famokarana herinaratra ao Chernobyl
Ny 26 Aprily 1986, niteraka fiparitahan'ireo singa nokleary mitondra taratra ho eny amin'ny habakabaka ny faharavàn'ilay toby nokleary famokarana herinaratra tao Chernobyl any avaratr'i Okraina, an'hetsiny maro — raha tsy an-tapitrisa mihitsy — ny olona tao Okraina, Bielorosia, Rosia, ary tany amin'ny faritra Eoropa Atsinanana no notandindonin'ny taratra mahery vaika taminà fatra avo dia avo.
Vokatry ny taratra avy ao Chernobyl, mbola tsapa hatrizao ny fiantraikan'ny fiparitahan'ireo taratra nokleary: maherin'ny 500.000 ny olona any Bielorosia, ilay firenena tena voa mafy indrindra tamin'ilay loza mahatsiravina, no manana olana amin'ny fihary tiroida ary maherin'ny 2 tapitrisa ireo olona miaina any amin'ny faritry ny firenena mametraka azy ireo ho tena atahorana ho tratry ny aretina.
Tamin'ny herinandro lasa, ny harivan'ny faha 31 taonan'ilay loza mahatsiravina, nisy andianà poloney mpandehandeha nanapaka hevitra ny handrehitra indray ireo jiro ao Pripyat, tanàna haolo feno taratra any amin'ny efatra kilaometatra mahery miala ny vondrom-pihary herinaratra ao Chernobyl. Andro iray taorian'ny faharavàna no nesorina ny olona tao Pripyat ary haolo izy nanomboka teo — na dia lasa ivon'ny indostrian'ny fizahantany momba ny loza mahatsiravina izay niroborobo tao amin'ilay faritra tsy azo aleha ao Chernobyl aza.
Tongan'ny hazavana ao amin'ny sekoly iray ao Pripyat.
Tamin'ny fampiasàna vondrom-pihary herinaratra no nahafahan'ireo andianà Poloney namerina ny herinaratra ho an'ny sasany tamin'ireo tranobe ao Pripyat, nitondra indray ny hazavana ho an'ilay tanàna haolo, sambany aty aorian'ny taompolo 3 mahery. Vetivety dia niparitaka nameno ny media sosialy mampiasa ny teny Rosiana manerana izao tontolo izao ireo sary nalefan'izy ireo tety anaty aterineto.
20 Aogositra 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana